पत्रकार पुडासैनीकाे मृत्युु बारे प्रहरीले गरे यस्ताे खुलासा – Purbi sanchar
पत्रकार पुडासैनीकाे मृत्युु बारे प्रहरीले गरे यस्ताे खुलासा
२०७६ श्रावण २३, बिहीबार ०१:००
काठमाडौं / चितवनको नारायणगढस्थित कंगारु होटलमा आत्महत्या गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले प्राण त्याग्नुअघि रेकर्ड गराएको भिडियो रेकर्डमा आफू सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेबाट प्रताडित भएको बताएका छन् ।
यो कुराको पुष्टि गर्दै मृतक पत्रकारका दाई तथा नुवाकोट वेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का सदस्य दीपक पुडासैनीले नेपालआजसँगको कुराकानीमा भने, ‘ हो, त्यो भिडियो मैले हेरेँ । रवि लामिछानेसहित तीन पत्रकारको नाम उनले उल्लेख गरेका छन् । रवि लामिछानेले आत्महत्याका लागि शालिकलाई दूरुत्साहन गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला । अहिले नै अनुसन्धानमा रहेको विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन । किनभने म पनि जनप्रतिनिधि हुँ । मैले पनि अनुसन्धानमा रहेको विषयमा गोप्यता कायम गर्नुपर्छ ।’
दीपकले शालिकलाई मानसिक तनाव दिइएको उनले आफ्नो भिडियोमा बताएको उल्लेख गरेका छन् । भाईलाई मानसिक तनाव दिनेहरुलाई कारबाही होला कि नहोला भन्ने आफूले पनि प्रतीक्षा गरेर अनुसन्धानमा सघाइरहेको उल्लेख गरे ।
यस विषयमा खासै बोल्न नचाहेका दीपकले छोटो कुुराकानीमा भने, ‘आत्महत्याको दूरुत्साहन गरेको हो ? भनेर तपाईंले सोध्नु भयो भने म पनि होइन भन्न सक्दिनँ ।’
‘पत्रकार पुडासैनीको मोबाइल अफ थियो, चार्ज गरेर खोल्यौं’–एसपी मल्ल
चितवनको नारायणगढस्थित कंगारु होटलमा मृत भेटिएका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको साथमा भेटिएको भनिएको अडियो रेकर्डका बारे चितवन प्रहरीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । पहिले न्युज २४ को कार्यक्रम सीधा कुरामा काम गरेका पत्रकार पुडासैनीलाई कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले मानसिक यातना दिएको भन्ने विषयमा विभिन्न अनलाइनले लेखेका समाचार भाइरल हुन थालेपछि नेपालआजले चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लसँग यसबारे कुराकानी गरेको छ ।
कुराकानीका क्रममा एसपी मल्लले कसैलाई आरोप लगाइएको अडियो रेकर्ड भए नभएको विषयमा अहिले केही पनि बोल्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यस्तो अडियो रेकर्ड भेट्टाउने को पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ, हामीसँग पनि भेट गराइदिनुस् न ।’
पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणबाट बोल्नै नमानेका एसपी मल्लले अलिकति कुरा भने खोलेका छन् । उनले पत्रकार पुडासैनीको साथमा भेटिएको मोबाइल स्वीच अफ भएको अवस्थामा थियो । त्यसलाई चार्ज गरेर आफूहरुले खोलेको जानकारी दिए । उनीसँग टेलिफोनमा भएको छोटो कुराकानी जस्ताको त्यस्तैः
रवि लामिछानेले यातना दिएका कारण आफूले आत्महत्या गरेको भन्ने पत्रकार पुडासैनीको अडियो रेकर्ड छ भनेर समाचारहरु आउन थालेका छन् । के त्यस्तो अडियो मृतक पत्रकारको साथमा भेटिएको छ ?
के भेटिएको छ, के छैन भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन । किनभने हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं । उनको मृत्यु बारे अनुसन्धानकै क्रममा शव पोष्ट मार्टमका लागि पठाएका छौं । हत्या वा आत्महत्या त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ । त्यो रिपोर्ट आएपछि कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्ने भयो भने त्यसपछि नै भन्न सक्छौं ।
अडियो रेकर्ड भेटिएको हो कि होइन ? त्यसमा रवि लामिछानेको पनि प्रशंग छ कि छैन ?
–अडियो मात्रै होइन, सबै कुरा भेटिएको छ नी । तर अनुसन्धानमा भएकोले भन्न मिल्दैन ।
के अडियो रेकर्ड मोबाइलमै थियो ?
अब होला थाहा छैन ।
त्यो अडियो रेकर्ड सुन्ने मान्छेहरुले भनेको आधारमा समाचारहरु बन्न थालेका छन् नी त ?
हामीले कुनै पनि कुरा कसैलाई दिएका छैनौं । जसले ‘अडियो रेकर्ड सुनेको छु’ भन्छ उसैलाई सोध्नु प¥यो । त्यस्तो सुन्ने मान्छेले हामीलाई पनि त्यो अडियो रेकर्ड उपलब्ध गराइदिए अनुसन्धानमा सजिलो हुन्थ्यो ।
आत्महत्या हो कि के हो कहिले थाहा हुन्छ ?
पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ ।
सुसाइड नोट छ ?
प्रहरीभन्दा अगाडि नै अडियो वा कुनै प्रमाण अरुले लग्यो कि ?
होइन त्यस्तो । मोबाइलेको कुरा गर्ने हो भने हामीले नै भेटेको हो । सुरुमा अफ थियो । चार्ज गरेर खोलेर हेरको हुन सक्छ । मोबाइलमा भएको विषय बाहिर गएको छैन ।
यसबारे लामिछानेले नेपाल आजलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफूले भर्खर थाहा पाएको जनाएका छन् । यसबारेमा आफूले भर्खर थाहा पाएकाले केहीबेरमा सामाजिक सञ्चालमार्फत प्रतिक्रिया दिने उनले बताए । नेपाल अाजबाट साभार